नायक भए हवल्दार ~ The Nepal Romania
आलोक नेम्वाङ्गले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र सानो संसार तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन ? हेर्नु भएको छ भने पनि सायद एक चिज ख्याल गर्नु भएन होला !
सो चलचित्रमा प्रहरी निरिक्षक बनेका अभिनेता नीर शाहको सहयोगीको रूपमा रहेका दुई साहयक हवल्दार मध्येका एक व्यक्ति नायक बनेका छन् । पहिलो चलचित्रमा हवल्दार अभिनय गर्न पाएका ती भाग्यमानी कलाकार हुन् सुवास थापा । हवल्दारबाट नायक बन्न सफल नायक सुवास अहिले दर्शकको मन जित्ने तयारीमा छन् । रंगमञ्चका कुशल कलाकार समेत रहेका सुवास ११ गते देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचत्रि कोही मेरोमा नायक आर्यन सिग्देलसंगै शिर्ष भूमिकामा देखिदैछन् । तीन बर्षअगाडी चलचित्र सानो संसारमा प्रहरी हवल्दारको अडिसन दिएर पास भएका ३० बर्षीय सुवासको अभिनय र लुक्सले उनलाई थप उचाईमा पुर्‍याएको छ । जस अनुरूप सोही समयमा निर्देशक नेम्वाङ्गले उनलाई कर्णदासद्धारा गाइएको एक म्यूजिक भिडियोमा समेत अभिनय गर्न लगाए । यध्यपी विविध कारणले सो म्यूजिक भिडियो भने बजारमा आएको छैन् ।
"पहिले त मैले वास्ता गरिन तर निर्माता भाष्कर ढुङ्गानाले सुवास हिरो बन्न लायक छ भने पछी मैले पनि उसलाई बुझ्न थालें र उ मा हिरो बन्ने गुण देखे" निर्देशक नेम्वाङ्गले भने । सो समयमा थाहाँ नपाई राम्रो कलाकारलाई सामान्य रोल दिएकाले केही पछुतो मानेका आलोकले अन्नत: आफ्नो दोस्रो प्रोजेक्टमा उनलाई लिएका छन् । आशा गरौ हवल्दारबाट सिधै नायक भएका सुवासले सवैको मन जित्न सकुन् ।